Qabashada warqadaha - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » JOOJISO » Qabashada warqadaha
Joojinta sigaarka, uumiga ama tubaakada kale waxay lamid tahay barashada xirfad cusub - sida kubbadda koleyga ama wadista gaari. Waxa ugu muhiimsan ee la sameeyo waa ku dhaqanka - maxaa yeelay mar kasta oo aad isku daydo inaad joojiso, waxaad baranaysaa wax cusub. Taasi waa sababta isku day kasta oo loo xisaabiyo. Hubso inaad adigu ammaantaada siiso dhammaan shaqada aad qabanaysid ee ah inaad joojiso. Ha iloobin, haddii aad u baahan tahay caawimaad yar oo dheeraad ah si aad u joojiso, 802Quits waxay bixisaa habeyn ku caawi taleefan (1-800-QUIT-NOW), shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah.
Mararka qaar, in kasta oo ujeedku yahay in gebi ahaanba la joojiyo, waad sibibixan kartaa. Dhammaan is-daba-galka macnaheedu waa inaad u baahan tahay tababar yar oo dheeraad ah oo wax looga qabanayo xaalad gaar ah. Furaha ayaa ah dib ugu soco jidka saxda ah warqaddana ha u oggolaan inay kaa hor istaagto. Waa wax dabiici ah inaad niyad jabto ama aad ka fikirto sigaar rabitaankiisa ama siibasho. Diyaar u noqo tan, oo ha u oggolaan in dareennada diidmada ahi kugu sababaan inaad dib ugu noqoto sigaarcabista, uus-uus ama tubaako kale.
Xusuuso: Waraaqiddu waa warqad keliya. Micnaheedu maahan inaad tahay qof sigaar caba, ubad sameeya ama isticmaala tubaakada markale. Ka-joojinta tubaakada inta badan way adkaan kartaa. Raac talaabooyinkan si ay kaaga caawiso inaad joojiso. Haddii aad dib u soo noqotid, xusuusnow, dad badan ayaa sibxanaya! Ka fikir intaad ku soo qaadatay safarkan nolol aan tubaako lahayn oo ku siin doonta xoriyad badan inaad ku raaxaysato waxyaabaha kale. Kaliya "kusoo laabo wadada saxda ah."
Weligaa ha iloobin sababaha aad u joojisay.
Ha u qaadin xitaa "kaliya 1 wiif" oo ah sigaar kale ama "kaliya 1 calali" oo ah tubaakada ama "kaliya 1 vape-hit".
Ha u maleynin hana u maleynin inaad mid uun yeelan karto.
Qorshee xaaladaha halista ah (caajis, cabbitaanka aalkolada, walbahaarka) oo go'aan ka gaarto waxa aad sameyn doonto halkii aad tubaako ka isticmaali lahayd.
Ku abaalmari naftaada inaadan isticmaalin tubaakada. U isticmaal lacagta aad kaydiso inaadan iibsanayn sigaarka ama alaabada kale wax adiga macno kuu leh. Xitaa wey weynaan kartaa sida gaariga la isticmaalay, maadaama 1 baakad sigaar ah maalintii ay ku kici karto $ 3,000 sanadkii.
Ku faan inaad isku daydo inaad joojiso tubaakada oo sheekadaada la wadaag dadka kale.
Bilaw inaad ka fikirto naftaada inaad tahay qof aan sigaar caba, sigaar-cabe aan.
Ma u baahan tahay mashquul?
Xullo laba qalab oo lacag la'aan ah oo aan boostada kuugu soo diri doonno!
Qalabka Joojinta Bilaashka ah>